लोकतन्त्र कि देउवा संकटमा ! टंक राईको लेख - Hamrokhotang
Home » Sahitya » लोकतन्त्र कि देउवा संकटमा ! टंक राईको लेख
लोकतन्त्र कि देउवा संकटमा ! टंक राईको लेख
देउवा संकटमा हुनु भनेको लोकतन्त्र संकटमा हुनु होइन । कम्युनिस्टहरू लोकतन्त्र गणतन्त्रकै लागि लड्दै आएका छौं । कांग्रेसले भन्दा हजारौं बढी संख्यामा गणतन्त्रकै खातिर कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले आहूती दिएका छन् ।
दशैंलगत्तै देशमा एउटा राजनीतिक भूँइचालो गयो । त्यो कत्रो थियो भन्ने अनुमान तत्कालै गर्न सकिएन । तर, बिस्तारै अफ्टर शक (पराकम्प)हरू सुन्दै र अनुभव गर्दै जाँदा त्यो भुइचालो १० रेक्टर स्केलको भन्दा बढीको रहेँछ । कांग्रेसका धुरन्धर विद्वान प्रदीप गिरिले समेत सन्तुलन गुमाएको देखेपछि लाग्यो– कांग्रेसमा कम्युनिस्टहरूमा भन्दा धेरै गुणा ठूलो भूँइचालो गएछ । वामपन्थी दलहरुबीच तत्काल गठबन्धन र लगत्तै पार्टी एकताको सैद्धान्तिक सहमतिले कांग्रेसका नेताहरुले सन्तुलन गुमाएको छ । उनीहरू अत्यन्तै निराधार र तथ्यहिन तर्कसाथ प्रस्तुत भइरहेका छन् ।
लेखक टंक राई
राजनीतिमा उचित समयमा उचित कदम चाल्ने मात्रै सफल भइन्छ । अनुचित समयमा उचित कदम चालेपनि त्यो सफल नहुने रहेछ । अहिले उचित समयमा उचित निर्णय भएको छ । एउटै सैद्धान्तिक मूलबाट विकसित वामशक्तिहरू अब छुट्टा–छुट्टै रहन आवश्यक छैन । स्थानीय तहको परिणाम र मुलुक राजनीतिक शक्ति सन्तुलनले दुई ठूला वाम शक्तिहरुलाई एक ठाउँ उभिने अवस्था ल्याएको छ । स्थानीय तहसम्मै एकताको पक्षमा आवाज उठ्नुले त्यो प्रमाणित गर्छ अर्थात् उचित समयमा उचित कामको थालनी भएको छ ।
यो गठबन्धनबारे अनेकन तर्क भइरहेको छ । खासगरी कांग्रेस नेताहरुबाट । उनीहरुको आरोप– अपवित्र गठबन्धन भन्ने छ । माओवादी केन्द्र र एमालेबीच गठबन्धन नगरेर कमल थापासँग गर्दा चाँही पवित्र गठबन्धन हुन्छ ? कांग्रेस नेताहरू जवाफ दिनसक्ने अवस्थामा छैनन् । किनभने, उनीहरू वाम एकताको भूँइचालोबाट हल्लिएका छन् । गगन थापाजस्ता युवा नेता कमल थापाको कार्यकर्ता भएर भोट माग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
कांग्रेसले बुझ्नुपर्ने तथ्य भनेको यो गठबन्धन कसैविरुद्ध होइन । कुनै देशविरुद्ध छैन । यो गठबन्धन देशको समृद्धि र स्थीर सरकारका लागि हो । अस्थिर राजनीति भएका देशहरुमा ‘आयाराम गयाराम’ भन्ने व्यङ्ग्य खूब चल्छ । भारतमा राम भन्ने एक सांसद थिए । संसदीय समीकरण कस्तो थियो भने राम जता गयो उतै बहुमत हुने । अनि, राम बिहान एकातिर जान्छ बेलुकी अर्कातिर । सरकार कहिल्यै स्थीर नहुने । नेपालको अवस्था पनि यस्तै छ । कहिल्यै स्थीर सरकार बन्न नसक्ने । वाम गठबन्धन आयाराम गयारामको अवस्था हटाउन हो । राजनीतिक, सरकार र मन्त्रीहरुको बद्नामी रोक्न हो ।
वाम गठबन्धनले कांग्रेसलाई पनि फाइदा नै पुगेको छ । राजनीतिक संस्कार सिक्न मद्दत गरेको छ । मैले यस पटक जसरी कांग्रेसको टिकट वितरणमा सालिनता कहिल्यै देखेको थिइन । सँधै टिकटकै लागि फोहोरी खेल खेल्ने कांग्रेस मिलेर चुनावमा लड्दैछ । वाम गठबन्धनको फाइदा कांग्रेसभित्र पनि भएको छ ।
अहिले कांग्रेसका नेताहरू लगातार एउटै रटानमा छन्– वाम एकताले लोकतन्त्र संकटमा पर्छ । तथ्यले त्यसो भन्दैन । शेरबहादुर देउवा संकटमा छन् । यो तथ्य हो । तर, वाम गठबन्धनले लोकतन्त्रमा कुनै संकट छैन । देउवा संकटमा हुनु भनेको लोकतन्त्र संकटमा हुनु होइन । हामी कम्युनिस्टहरू लोकतन्त्र गणतन्त्रकै लागि लड्दै आएका छौं । कांग्रेसले भन्दा हजारौं बढी संख्यामा गणतन्त्रकै खातिर कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले आहूती दिएका छन् । बरु, कांग्रेसका कारण नेपालमा सँधै लोकतन्त्र संकटमा पर्दै आएको छ । ०१५ सालमा कांग्रेसले बहुमत ल्यायो । त्यसलाई जोगाउन सकेन । ०४८ मा कांग्रेसले बहुमत ल्यायो, कांग्रेसकै कारण यो संकटमा प¥यो । जति पटक लोकतन्त्रमा संकट देखियो, त्यसको कारक कांग्रेस नै थियो ।
मुलुकको अस्थिरताले गणतन्त्र फेरि संकटमा पर्न सक्छ । कांग्रेस त्यही चाहन्छ । मुलुकमा स्थीरता उसलाई मन पर्दैन । तर, हामी अब त्यसो हुन दिदैनौं । वाम गठबन्धनले संयुक्त घोषणापत्र ल्याएको छ । अर्थात्, अबको पाँच वर्ष त्यही घोषणापत्रकै आधारमा वाम सरकारले कार्यक्रम ल्याउछ । मुलुक समृद्धिको रेखातिर बढ्छ । गणतन्त्रको अनुभूति हुनेगरी आगामी सरकारले काम गर्नेछ । दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदरमा मुलुकलाई लैजान नै वाम एकताको पहल कदमी अघि बढेको हो ।
अब, हाम्रो राजनीतिक कार्यभार समाजवादतिर मुलुक अघि बढाउनु हो । हिजोअस्ति जस्तो माओवादीले एमालेलाई र एमालेले माओवादीलाई गाली गरेर मात्रै राजनीतिक हुँदैन । त्यस्तो राजनीतिले कहीं पु¥याउँदैन पनि । अहिलेसम्म वाम गठबन्धन र एकताको पक्षमा कार्यकर्ता तहबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ । अबको वाम एकता पनि कार्यकर्ताको सुझाव र दबाव मै निर्भर पर्छ । (खुल्लामञ्च मासिकमा प्रकाशित)